မက်ဆီဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေနဲ့ဆို ဂိုးမြူးလေ့ရှိပါတယ်
ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေနဲ့ ဆုံတွေ့တိုင်း ဂိုးမြူးတတ်တဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းကို Messi ဆက်ထိန်းနိုင်မလား
3 Oct 2018 . 6:51 PM
ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်(၂)အဖြစ် ဒီနေ့(ဗုဒ္ဓဟူး)မှာ စပါးအသင်းနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ ၀င်ဘလေကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက အင်္ဂလိပ်ကလပ်တွေနဲ့ ဆုံတွေ့တိုင်း ဂိုးမြူးလေ့ရှိတဲ့ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ Messi အဲဒီ မှတ်တမ်းကောင်းကို ဆက်ထိန်းနိုင်မလား ဆိုတာပါပဲ။
မက်ဆီဟာ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေနဲ့ စုစုပေါင်း (၂၈)ပွဲ ဆုံတွေ့ခဲ့ဖူးပြီး (၁၉)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တယ်။ မက်ဆီအနေနဲ့ အာဆင်နယ်၊ မန်ယူ၊ လီဗာပူးလ်၊ ချယ်လ်ဆီး၊ မန်စီးတီး တို့နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပေမယ့် စပါးအသင်းနဲ့က အဓိက ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုံး ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆီရဲ့ ကစားသမားဘ၀မှာ မန်ယူနဲ့ (၄)ပွဲကစား (၂)ဂိုးသွင်း၊ လီဗာပူးလ်နဲ့ (၂)ပွဲကစား သွင်းဂိုးမရှိ၊ အာဆင်နယ်နဲ့ (၆)ပွဲကစား (၉)ဂိုးသွင်း၊ မန်စီးတီးနဲ့ (၆)ပွဲကစား (၆)ဂိုး၊ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ (၁၀)ပွဲကစား၊ (၃)ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုက မက်ဆီဟာ ၀င်ဘလေကွင်းမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၀-၁၁ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် ၀င်ဘလေကွင်းမှာ မန်ယူနဲ့ ဘာစီလိုနာ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး မက်ဆီ တစ်ဂိုးသွင်းခဲ့သလို (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မက်ဆီအနေနဲ့ သူ့အတွက် အောင်မြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၀င်ဘလေကွင်း၊ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေနဲ့ ဆုံတွေ့တိုင်း ဂိုးမြူးတတ်တဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းတွေကို ဆက်ထိန်းနိုင်မလားဆိုတာ မြန်မာစံတော်ချိန် ကြာသပတေး မနက် (၁း၃၀)မှာ အဖြေပေါ်ထွက်လာတော့မှာပါ . . .
ပရီးမီးယားလိဂျအသငျးတှနေဲ့ ဆုံတှတေို့ငျး ဂိုးမွူးတတျတဲ့ မှတျတမျးကောငျးကို Messi ဆကျထိနျးနိုငျမလား
ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲစဉျ(၂)အဖွဈ ဒီနေ့(ဗုဒ်ဓဟူး)မှာ စပါးအသငျးနဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးတို့ ဝငျဘလကှေငျးမှာ ယှဉျပွိုငျကစားကွမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲမှာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာက အင်ျဂလိပျကလပျတှနေဲ့ ဆုံတှတေို့ငျး ဂိုးမွူးလရှေိ့တဲ့ ဘာစီလိုနာတိုကျစဈမှူး မကျဆီ Messi အဲဒီ မှတျတမျးကောငျးကို ဆကျထိနျးနိုငျမလား ဆိုတာပါပဲ။
မကျဆီဟာ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ပရီးမီးယားလိဂျကလပျတှနေဲ့ စုစုပေါငျး (၂၈)ပှဲ ဆုံတှခေဲ့ဖူးပွီး (၁၉)ဂိုးသှငျးယူခဲ့တယျ။ မကျဆီအနနေဲ့ အာဆငျနယျ၊ မနျယူ၊ လီဗာပူးလျ၊ ခယျြလျဆီး၊ မနျစီးတီး တို့နဲ့ ဆုံတှခေဲ့ပမေယျ့ စပါးအသငျးနဲ့က အဓိက ပွိုငျပှဲမှာ ပထမဆုံး ရငျဆိုငျရတာဖွဈပါတယျ။
မကျဆီရဲ့ ကစားသမားဘဝမှာ မနျယူနဲ့ (၄)ပှဲကစား (၂)ဂိုးသှငျး၊ လီဗာပူးလျနဲ့ (၂)ပှဲကစား သှငျးဂိုးမရှိ၊ အာဆငျနယျနဲ့ (၆)ပှဲကစား (၉)ဂိုးသှငျး၊ မနျစီးတီးနဲ့ (၆)ပှဲကစား (၆)ဂိုး၊ ခယျြလျဆီးနဲ့ (၁၀)ပှဲကစား၊ (၃)ဂိုးသှငျးခဲ့တယျ။ နောကျထပျ မှတျတမျးကောငျးတဈခုက မကျဆီဟာ ဝငျဘလကှေငျးမှာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကိုငျမွှောကျနိုငျခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၀-၁၁ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲအဖွဈ ဝငျဘလကှေငျးမှာ မနျယူနဲ့ ဘာစီလိုနာ ဆုံတှခေဲ့ပွီး မကျဆီ တဈဂိုးသှငျးခဲ့သလို (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မကျဆီအနနေဲ့ သူ့အတှကျ အောငျမွဖွေဈခဲ့တဲ့ ဝငျဘလကှေငျး၊ ပရီးမီးယားလိဂျကလပျတှနေဲ့ ဆုံတှတေို့ငျး ဂိုးမွူးတတျတဲ့ မှတျတမျးကောငျးတှကေို ဆကျထိနျးနိုငျမလားဆိုတာ မွနျမာစံတျောခြိနျ ကွာသပတေး မနကျ (၁း၃၀)မှာ အဖွပေျေါထှကျလာတော့မှာပါ . . .